OTU ESI EME KA RAM LAPTỌỌPỤ - N'IHI BEGINNERS - 2019
Otu esi eme ka nchekwa RAM dị na laptọọpụ
Ọ bụ obere laptọọpụ na-ebuli (ma ọ bụ, n'ọnọdụ ọ bụla, ọ siri ike), mana n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dị nnọọ mfe iji mụbaa RAM. Ntuziaka a site na nkwụsịtụ otu esi eme ka ebe nchekwa nke laptọọpụ dịkwuo elu ma tinye ya na ndị ọrụ novice.
Ụfọdụ laptọọpụ nke afọ ndị gara aga nwere ike ịnwe nhazi nke enweghị ụkpụrụ zuru oke, dịka ọmụmaatụ, Core i7 na 4 GB nke RAM, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbawanye ruo 8, 16 ma ọ bụ ọbụna 32 gigabytes maka ụfọdụ laptọọpụ, nke maka ụfọdụ ngwa, egwuregwu, ọrụ na vidio na ndịna-emeputa nwere ike ịmalite ọrụ ahụ ma dị ọnụ ala. A ghaghị iburu n'obi na iji rụọ ọrụ na Rọm dị ukwuu, ị ga-achọ ịwụnye Windows 64-bit na laptọọpụ gị (ọ bụrụ na a na-eji 32-bit ugbu a), n'ụzọ zuru ezu: Windows adịghị ahụ RAM.
Kedu RAM dị mkpa maka laptọọpụ
Tupu ịzụta ihe nchekwa ebe nchekwa (RAM modules), iji mee ka RAM dị na laptọọpụ, ọ ga-adị mma ịmara njedebe ole na ole RAM na ya na ole n'ime ha nọ na ya, yana ụdị ụdị ncheta dị mkpa. Ọ bụrụ na ị nwere Windows 10 arụnyere, enwere ike ime ya n'ụzọ dị mfe: malite Task Manager (site na menu nke gosipụtara site na ịpị aka bọtịnụ Malite,) ma ọ bụrụ na a na-enye Task Manager na mpempe akwụkwọ, pịa bọtịnụ nkọwa n'okpuru, wee gaa na taabụ "Ọrụ" wee họrọ "Nchekwa."
N'okpuru aka nri ị ga-ahụ ozi gbasara ọtụtụ nkwụsị ebe nchekwa na ole ole dị, yana data na oge ncheta na mpaghara "Speed" (site na ozi a ị ga-achọpụta ma ọ bụrụ na eji DDR3 ma ọ bụ DDR4 ebe nchekwa na laptọọpụ, a na-egosipụtakwa ụdị ncheta n'elu) ). N'ụzọ dị mwute, data ndị a anaghị adị mma mgbe niile (mgbe ụfọdụ ọnụnọ 4 ma ọ bụ oghere maka RAM gosipụtara, ọ bụ eziokwu na e nwere 2 n'ime ha).
Na Windows 7 na 8 enweghị ozi dị otú a na njikwa ọrụ, ma ebe a, usoro CPU-Z n'efu ga-enyere anyị aka, nke na-egosi na nkọwa zuru ezu gbasara kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ. Ịnwere ike ibudata ihe omume ahụ site na ebe nrụọrụ weebụ nke onye mmepụta ọrụ na http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html (M nwere ike ibudata ebe nchekwa ZIP iji mee ka CPU-Z na-enweghị ihe nrụnye na kọmpụta, nke dị na mpịakọta Download na aka ekpe).
Mgbe nbudata, gbasaa ihe omume ahụ wee debaa taabụ ndị na-esonụ, nke ga-enyere anyị aka n'ọrụ nke ịbawanye nchekwa RAM nke laptọọpụ:
Na SPD taabụ, ịnwere ike ịhụ ọnụọgụ ebe nchekwa, ụdị ya, olu na emeputa.
Ọ bụrụ na, mgbe ị na-ahọrọ otu n'ime oghere ahụ, ubi niile wee bụrụ ihe efu, nke a pụtara na oghere dị ka ihe efu (ozugbo m ghọtara na nke a abụghị ikpe).
Na ebe nchekwa taabụ, ị nwere ike ịhụ nkọwa gbasara ụdị, ngụkọta nchekwa, oge.
Na taabụ Mainboard, ị nwere ike ịlele ozi zuru ezu banyere laptọọpụ laptọọpụ, nke na-enye gị ohere ịchọta nkọwa nke motherboard na chipset na Intaneti ma chọpụta kpọmkwem ebe nchekwa a na-akwado na ole.
N'ikpeazụ, n'ọtụtụ ọnọdụ, nanị ileba anya na SPD taabụ; niile ozi dị mkpa banyere ụdị, ugboro ole na nọmba nke ohere dị na ya ma ị nwere ike inweta ya azịza nye ajụjụ ma ọ ga-ekwe omume iwelie ihe nchekwa nke laptọọpụ na ihe dị ya mkpa.
Rịba ama: na ụfọdụ, CPU-Z nwere ike igosi 4 ebe nchekwa maka laptọọpụ, nke dị naanị 2 n'eziokwu. Tụlee nke a, yana eziokwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ niile nwere oghere abụọ (ma e wezụga maka egwuregwu ụfọdụ na ụdị ndị ọkachamara).
Dịka ọmụmaatụ, site na ihuenyo n'elu, anyị nwere ike ịchọta nkwubi okwu:
Na laptọọpụ oghere abụọ maka RAM.
Otu na-ejikwa 4GB DDR3 PC3-12800 modul.
Ihe eji eme ihe bụ HM77, ego kachasị akwado RAM bụ 16 GB (nke a na-achọgharị na Ịntanetị na-eji akara chipset, laptọọpụ ma ọ bụ motherboard).
Ya mere m nwere ike:
Zụta ihe ọzọ 4 GB RAM SO-DIMM module (ebe nchekwa maka laptọọpụ) DDR3 PC12800 na iwelie laptọọpụ nchekwa ruo 8 GB.
Zụrụ obere modulu abụọ, ma 8 GB ọ bụla (4 ga-ewepụ) ma mee ka RAM dị na 16 GB.
Na-arụ ọrụ na ọnọdụ ọhụụ abụọ (nke a dịkwa mma, ebe nchekwa na-agba ọsọ ọsọ ugboro abụọ) a chọrọ ọkwa abụọ nke otu olu ahụ (onye nrụpụta nwere ike ịdị iche ma ọ bụrụ, dịka ọmụmaatụ, anyị na-eji nhọrọ mbụ) na nkwụsị abụọ. Buru n'uche na a na-agbakwụnye ebe nchekwa zuru ezu maka njikọta niile: dịka ọmụmaatụ, ebe nchekwa kachasị dị 16 GB na e nwere mkpọda abụọ, nke a pụtara na ị nwere ike iwunye 8 + 8 GB, mana ọ bụghị otu ebe nchekwa maka 16 GB.
Na mgbakwunye na usoro ndị a, ịnwere ike iji usoro ndị a iji chọpụta ebe nchekwa dị mkpa, ọnụọgụ dị ole na ole dị, na ole ị nwere ike ime ka ọ dịkwuo ike:
Chọọnụ maka ozi gbasara oke kachasị nke RAM kpọmkwem maka laptọọpụ gị na Intaneti. N'ụzọ dị mwute, data ndị a adịghị adị mgbe niile na saịtị ndị ọrụ, mana mgbe mgbe na saịtị ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na Google abanye na nyocha "laptọọpụ nlereanya max ebule" - na-abụkarị otu n'ime nsonaazụ mbụ bụ ebe nrụọrụ weebụ sitere na onye na-emepụta ebe nchekwa dị oké ọnụ ahịa, bụ nke nwere ezi data na ọnụ ọgụgụ ohere, ọnụ ọgụgụ kachasị na ụdị ihe nchekwa nke enwere ike iji (ihe atụ nke ozi nseta ihuenyo n'okpuru).
Ọ bụrụ na ọ gaghị esiri gị ike ịhụ anya ihe echetara ebe nchekwa dị na laptọọpụ, ma enwere oghere n'efu (mgbe ụfọdụ, karịsịa na laptọọpụ ala dị ala, ọ nwere ike ọ gaghị enwe oghere n'efu, ebe nchekwa nchekwa dị ugbu a na-etinye aka na motherboard).
Esi tinye RAM na laptọọpụ
N'ihe atụ a, anyị ga-atụle nhọrọ nke ịwụnye RAM na laptọọpụ, mgbe onye nrụpụtara nyere ya - na nke a, enwere ohere ịbanye na ebe nchekwa ahụ, dị ka iwu, enwere ihe mkpuchi dị iche iche maka nke a. Na mbụ, ọ fọrọ nke nta ka ọkọlọtọ maka laptọọpụ, ugbu a, n'ịchụso kọmpụta ma ọ bụ maka ihe ndị ọzọ, mkpuchi dị iche iche nke teknụzụ iji dochie components (iwepụ mkpa iji wepụ akụkụ dum) dị na ngwaọrụ ụfọdụ na ngalaba ụlọ ọrụ, ebe ọrụ na laptọọpụ ndị ọzọ na-agafe oghere nke onu ahia.
Ee na ultrabooks na kọmpụta kọmpụta ọ dịghị ihe dịka nke a: ịkwesịrị iwepụ ma jiri nlezianya kpochapụ akụkụ nile nke ala, usoro nkwekọrịta ahụ nwere ike ịdị iche site na ihe nlereanya na ihe nlereanya. Ọzọkwa, maka laptọọpụ ụfọdụ dị otú ahụ nwelite pụtara ịhapụ akwụkwọ ikike, tụlee nke a.
Rịba ama: ọ bụrụ na ị maghị ị ga-esi wụnye ebe nchekwa na laptọọpụ gị, ana m akwado ịga YouTube ma chọọ nkowa okwu "laptọọpụ nlereanya_m ram upgrade" - na nnukwu ihe ịga nke ọma ị ga-ahụ vidiyo ebe usoro dum, tinyere nkwụsị nke mkpuchi, ga-egosipụta ihu gị. Ana m edepụta ajụjụ Bekee maka ihe mere na na Russia, ọ na-esighi ike ịchọta disassembly nke laptọọpụ ụfọdụ na ntinye nke ebe nchekwa.
Gbanyụọ laptọọpụ, gụnyere site na ntaneti. Ọ dịkwa mma iji wepụ batrị ahụ (ọ bụrụ na enweghị ike gbanyụọ ya n'enweghị mmepe laptọọpụ ahụ, kpochapụ batrị ahụ mgbe ọ gasịrị).
Jiri screwdriver, mepee mkpuchi ahụ, ị ​​ga-ahụ igbe modulu arụnyere n'ime oghere. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ihe mkpuchi dị iche, ma akụkụ niile nke azụ, gbalịa ịchọta ntuziaka maka otu esi eme nke a n'ụzọ ziri ezi, ebe ọ bụ na ihe ize ndụ dị na ikpe ahụ.
Enwere ike iwepu ma ọ bụ gbakwunye ndị ọhụrụ na modul RAM. Mgbe wepụ, rịba ama na dịka iwu, a na-etinyekwa modulu ebe nchekwa na akụkụ ya na mkpa ka ehulata.
Mgbe ịtinye ebe nchekwa - mee ya n 'ugbua, rue oge mgbe nkedo nbanye (na ọtụtụ ụdị). Ihe a nile bụ ihe siri ike, emehiela ebe a.
Mgbe achichachara, dochie mkpuchi ahụ, wụnye batrị ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa - jikọọ na eletriki eletrik, gbanye laptọọpụ ma chọpụta ma ọ bụrụ na BIOS na Windows "ahụ" RAM arụnyere.